IiBunkers eSpain, ukusuka kwiBilbao Iron Belt ukuya ePunta Falcora | Uhambo lweNdaba
ULuis Martinez | | isiko, España
Zininzi iindawo zokuhlala eSpain isasazwe kwijografi yesizwe. Zizintlu zeemfazwe ilizwe lethu elithe lathwaxwa kuzo kwaye ezinye zazo zinokude zingahoywa kuba zidityaniswe nembonakalo yomhlaba kwaye zikwimo yokulahlwa.
Nangona kunjalo, abanye baya kutsala ingqalelo yakho ngenxa yobukhulu babo kunye nenkangeleko yabo enamandla. Ngakolunye uhlangothi, sinokuqwalasela ii-bunkers kwezinye iintlobo zezibonelelo. Sibhekisela kuyo iindawo zokufihla intloko ezifana nezo zikhoyo, umzekelo, kwi Moncloa Palace de Madrid okanye kwi Isiseko somkhosi saseTorrejon de Ardoz, kwakhona kuluntu oluzimeleyo lwaseMadrid. Kodwa le yokugqibela ayinakutyelelwa. Ke ngoko, siya kugxila kuhlobo lokuqala lwee-bunkers eSpain, ezo zezona onokuzazi.
1 Ibhanti yentsimbi yaseBilbao
2 Ukuqiniswa kweBhayi yaseAlgeciras
3 IiParapet zeVertex
4 I-Camposoto, isampuli ye-bunkers eSpain ukukhusela unxweme
6 Nules bunkers
7 IiBunkers zeCerro del Aceitunillo
8 I-El Capricho, phakathi kweyona bunkers inkulu eSpain
9 Iindawo zokuhlala ePunta Falcora
Ibhanti yentsimbi yaseBilbao
I-Bilbao Iron Belt, enye yeeseti ezigcinwe kakuhle ze-bunkers eSpain
Mhlawumbi yeyona nto ibalulekileyo yokuqinisa ezo zikhoyo kwilizwe lethu. Yakhiwa ngexesha leMfazwe yombango kwaye iqulathe imigca emibini yokhuselo eyahlulwe malunga namakhulu amabini eemitha. Bayirhangqe isixeko saseBasque ukuze basikhusele kakuhle. Lilonke, kwakukho malunga ikhulu elinamashumi asibhozo, ngokuqhelekileyo kudityaniswa imisele.
Ukuba ufuna ukuyindwendwela, sicebisa ukuba uyenze ngokusebenzisa indawo ye INtaba iAranda, enye yezona ndawo zigcinwe kakuhle. Ukongeza, unokufikelela kuyo ngokudumileyo imoto yekhebhula kwaye, ngengozi, baxabise iimbono ezimangalisayo zesixeko kunye neendawo ezisingqongileyo. Ngaphandle kokulibala ukuba uneendlela ezintle zokuhamba kule ntaba kunye nezikufutshane.
Ukuqiniswa kweBhayi yaseAlgeciras
Enye yeebhankethi kwindawo yeAlgeciras
Phakathi kwee-bunkers eSpain, le setethi yenye yezona zigcinwe kakuhle. I-Bay of Algeciras yayi, ngenxa yokuba kufuphi kwayo Gilbhraltha, ummandla obuthathaka ngokukhethekileyo ebudeni beMfazwe Yehlabathi II. Ngenxa yesi sizathu, le seti yokukhusela ibukekayo iye yakhiwa.
Yayinemigca emithathu. Eyokuqala yayiquka imiqolo emithandathu yamazinyo edragoni. Eli gama linikezelwa kwizakhiwo ezincinci zepyramidal ezibekwe phantsi ukuze zithintele ukuhamba kwezithuthi. Emva kwakhe, kwalandela indawo enemingxuma kunye nomgca wesibini nawo onemiqobo emhlabeni. Ekugqibeleni, umgca wesithathu waqulunqwa iibhedi ezisibhozo kwaye iseti yagqitywa kunye neendlwana ezininzi zompu ezibekwe kwimimandla esemdeni njengeSierra Carbonera okanye iSan Roque.
Ukuba ufuna ukwazi oku kuqiniswa, siyakucebisa ukuba uqale ngee-bunkers ezikufutshane ILa Línea de la Concepción, iBhunga lesiXeko labo liye lazibuyisela kwisimo sazo kwaye lenze indlela ethile yokubatyelela. Kodwa nakwidolophu yase Algeciras, ngokukodwa kwi-Centennial Park yayo, unokubona ezininzi zazo.
I-Vertex Parapetos, enye yee-bunkers eAragon
Eli gama linikezelwe kwisakhiwo esinqatyisiweyo onokuthi undwendwele kwindawo ekufutshane ikheji, kwiphondo lase Zaragoza. Ukongeza, kuya kuba lula kuwe ukuyifumana kuba ibekwe kumacala omabini endlela edibanisa le dolophu umthombo.
Iqukethe ezine bunkers uxande kunye nezikroba zodidi olubizwa ngokuba yipalisi yesikwere. Ukongeza, kwindawo yayo ephakathi babenendawo encinci yokugcina impahla kunye nendawo yokuphumla. Ngokuchanekileyo, kumasipala waseFuendetodos ungabona kwakhona Imbali yaseSierra Gorda, enye isethi yee-bunkers ezakhiwe njengento yokukhusela kwizinto zangaphambili. Kule meko, kukho iibhokisi zeepilisi ezine, iiparapet ezininzi kunye nezithuba eziphezulu zokukhusela.
I-Camposoto, isampuli ye-bunkers eSpain ukukhusela unxweme
Enye yeCamposoto bunkers
Babonisa umdla wokufuna ukwazi ngokupheleleyo Ulwandle lwaseCamposoto (Cádiz), abafumana kuyo igama labo. Zizakhiwo ezibini ezisasazwe ukusuka emantla ukuya emazantsi ezikwimeko embi kakhulu ngoku. Kodwa basenokutyelelwa. Ukuba uyakwenza oko, uya kumangaliswa kuzifumana zikwisanti enye eselunxwemeni.
Kwelinye icala, ekubeni ukule ndawo, ziphe ithuba lokutyelela San Fernando, apho uya kufumana eminye imizekelo yezakhiwo zomkhosi ezifana iinqaba zaseSan Romualdo kunye neSancti Petri okanye iibhetri ezikhuselayo ze Punta del Boqueron. Kodwa unokubona nezinye iindidi zezikhumbuzo ezinje ngecawe ephambili yaseSan Pedro kunye neSan Pablo okanye i-hermitage yaseCerro de los Mártires.
Ungabona kwakhona ii-bunkers kwesi sithili saseCordovan baena. Kule meko, zizakhiwo ezincinci ezijoliswe ukubeka iliso kwindawo kwaye zikwimeko efanelekileyo yolondolozo.
Kwelinye icala, ekubeni ukule ndawo, ungandwendwela i Icawa yaseSanta Maria kunye nevili elikhethekileyo leFerris elivelisa kwakhona ezindala ezenziwe ngama-Arabhu. Kwakhona, sele ungenile baena, sikucebisa ukuba ubone izikhumbuzo ezifana ne inqaba kunye nodonga olubiyelweyo lweAlmendina, iicawa zeNenekazi Lethu laseGuadalupe naseSan Francisco okanye izindlu ezinjengezo zeCountess neTercia. Akumangalisi ukuba uninzi lwezakhiwo kule dolophu zibandakanyiwe Ilifa leMbali yaseAndalusi.
Ngokunjalo, kuya kuba lula kuwe ukuba ufumane ezi bunkers kwiphondo UCastellón, ekubeni nabo basezantsi kwendlela ye-AP-7. Zizakhiwo ezine ezizimeleyo, oko kukuthi, abanalo unxibelelwano phakathi kwabo. Zonke zinesicwangciso setrapezoidal kunye nobude obuhluka phakathi kweemitha ezilishumi elinesihlanu kunye neshumi elinesibhozo. Ngokubhekiselele kubude bayo, ikwahluka ukusuka kwiimitha ezintathu ukuya phantse ezine. Ngokunjalo, uphahla lwayo luyi-semicircular kwaye lukwimo yevault ethotyiweyo. Ekugqibeleni, bonke banendlwane yompu kunye nesiseko sesetyhula.
Kwelinye icala, ekubeni useNules, qiniseka ukuba undwendwela iicawa ezinje abo boSapho oluNgcwele kunye nabangaPhelelekanga, IiMyuziyam ezifana neMbali okanye iimyuziyam zeMbasa kunye ne Ithiyetha yaseAlcazar. Kodwa ngaphezu kwakho konke, sondela Mascarell idolophu encinci ebiyelweyo yemvelaphi yamaxesha aphakathi.
IiBunkers zeCerro del Aceitunillo
Enye yeebhanka zeCerro del Aceitunillo, eLuque (Córdoba)
Ifumaneka kufutshane nedolophu yaseCordoba ULuka, kwinduli ephantse ibe ngamakhulu amathandathu eemitha ukuphakama, uya kuzibona kufuphi nendlela. Kule meko, yinqaba ephakathi kunye neendlwana ezintathu zompu. Eyokuqala imile okweprism, enobubanzi obuziimitha ezilithoba kunye nobude obuzimbini. Nangona kunjalo, isiseko singaphantsi komhlaba, okuthetha ukuba xa singaphakathi, siya kubonakala sibude kuwe.
Ngokwenxalenye yabo, iindlwana zompu zomatshini zinemilo yedome, isicwangciso somgangatho ojikelezayo kunye neembrasures ezimbini nganye. Zilinganisa malunga neemitha ezimbini kwaye ziqhagamshelwe kwinqaba esembindini ngeegalari zekhonkrithi.
Kwelinye icala, thatha ithuba lokukhenketha kwakho kwiibunkers eSpain kunye nokuhlala kwakho e-Aceitunillo ukutyelela uLuque. Inomtsalane i-castle venice, inqaba yama-Arabhu ubudala obungaqinisekiswanga. Ungabona kwakhona i kwicawe yerhamente yeNenekazi Lethu lokuNyuleka, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX emva kweecanons zeRenaissance, kunye neendawo zokuhlala zaseNuestra Señora del Rosario, iSan Bartolomé okanye iNuestra Señora de la Aurora. Kodwa ngaphezu kwakho konke, sondela kwi- umqolomba othakathiweyo, egcina imizobo yemizobo yomqolomba.
I-El Capricho, phakathi kweyona bunkers inkulu eSpain
Bunker yaseCapricho, eMadrid
Ifumaneka kwipaki yaseMadrid enegama elifanayo, inobukhulu obungafane bubonwe kwilizwe lethu. Yakhelwe ukugcina ikomkhulu lomkhosi weriphabliki ephakathi ngexesha lokukhusela iMadrid. Lulwakhiwo olunyanzelisayo lwamawaka amabini eemitha ezikwere ezifikelela kwishumi elinesihlanu phantsi komhlaba. Kwakhona, iya kukunika umbono wokuxhathisa kunye nokomelela kwayo into yokuba inokumelana neebhombu ezifikelela kwikhulu leekhilogram.
Kwelinye icala, sebenzisa ithuba lokundwendwela kwakho Caprice Park ukuyazi kakuhle, njengoko yenye yezona zintle eMadrid. Phakathi kwezinto ezimangalisayo, ukongeza kwigadi, unezindlu zaseCañas kunye ne-de la Vieja, Dance Casino, uMfuyi weenyosi okanye iHermitage. Kodwa kunye nemithombo efana neDelfines kunye ne-Octagonal, imifanekiso eqingqiweyo enjengesikhumbuzo kwiDuke ye-Osuna, isondo leSaturn okanye iTempile yeBacchus kunye nezikwere ezifana nenye. abalawuli.
Ezo ze-caprice ayizizo kuphela ii-bunkers onokuzibona eMadrid kunye neendawo eziyingqongileyo. kwenye ipaki, intshona, uya kufumana ezininzi ukusuka kwixesha elifanayo, nangona zincinci kakhulu.
Iindawo zokuhlala ePunta Falcora
Kule ndawo ikhethekileyo ye ICosta brava, ihlanganiswe ngokupheleleyo ICap de Creus Natural Park kwaye ecaleni kwe IRoses, kwakhiwa iinqaba ezintlanu zokubeka iliso elunxwemeni. Okumangalisayo kukuba, kule meko, kwakufanelekile ukugcinwa kwesi sithuba sendalo esimangalisayo, kuba ubukho bomkhosi buthintele uqikelelo lwezindlu.
Njengakwimeko zangaphambili, unokuthatha ithuba lotyelelo lwakho ePunta Falcora ukutyelela idolophu ekufutshane yaseRosas. Kwaye, ngendlela, ukuhlangabezana nolunye ulwakhiwo olukhulu olukhuselayo. Sithetha nge ICitadel, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX ukukhusela idolophu. Kwakhona, ngaphakathi kuyo kukho iintsalela ze Rhodes, idolophu yamaGrike yamandulo eyayakhiwe kuyo iRosas.
Sikwacebisa ukuba undwendwele iintsalela ze inqaba yobathathu emnye, ukusuka kwi-XVI, kunye nekhaya loonongendi laseSanta María. Kwaye, ngokufanayo, icawa yegama elifanayo, kwisitayile se-neoclassical, kunye ne Inqaba yaseVisigoti yasePuig Rom, kwindawo yakhe ekwakho imbono enika iimbono ezimangalisayo ze Empordà, kwelinye icala, kunye ne Iziqithi zaseMedes, kwezinye. Ekugqibeleni, ungalibali ukusondela kwi-megalithic complex.
Ukuqukumbela, sikubonise ezinye eziphambili iindawo zokuhlala eSpain. Kodwa sinokukuxelela ngezinye ezininzi. Umzekelo, ukuba Altea, i EKarmele en Barcelonaze ESanta Úrsula eTenerife okanye kwisinye blockhouse yaseColmenar del Arroyo, kwindawo yaseMadrid. Awucingi ukuba yenye indlela yokwenza ukhenketho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » IiBunkers eSpain
Uninzi lweedolophu ezintle eCadiz
Uninzi lweelali ezintle zaseMallorca